Maareeyaha Golis Oo Kulan Casho Sharaf Ah La Qaatay Ardayda Reer P/land ee India – SBC
Maareeyaha Golis Oo Kulan Casho Sharaf Ah La Qaatay Ardayda Reer P/land ee India
Posted by editor on May 27, 2012 Comments
Waxaa dalka india gaar ahaana Magaaladda Hyderabad ka dhacay kulan soodhaweyn iyo casho sharaf ah oo loo sameeyey Maareeyaha Guud Ee Shirkadda Isgaarsiinta Golis Mudane Aadam Shiikhdoon Cali.
Kulankaas oo ahaa mid aad loo soo agaasimay kana dhacay Hotelka Caalamigaa Ee Crystal Hotel ayaa waxaa si wadajir ah uwada xiriirinayey Cabdirisaaq Siciid Nuur iyo Mowliid Ashkir Cali.
Bilowgii waxaa lagu soodhaweeyey oo aayadaha quraanka ah ku furay Maxamed Cabdullaahi Cismaan (Sujuur), kadibna waxaa hadalka qaatay oo kalmad wacdi iyo eebe is xasuusin ah halkaas kasoo jeediyey Sheekh Axmed Maxamed Xasan(Shoodhaadhi). dabadeedna waxaa si toos ah loo guda galay barnaamijyadii kala duwanaa ee xafladda.
Kadibna xiriiriyaasha xafladda ayaa kusoo dhaweeyey Micrafoonka Cabdirisaaq Nuur Daahir Oo ah Gudoomiyaha Ururka Dalkaab, wuxuuna Cabdirisaaq kawaramay Taariikh nololeedka Md.Adam Sheekhdoon kadibna wuxuu hadala amaan iyo bogaadin ah usoo jeediyey Shirkadda Golis sida ay marwalba ugu howlan tahay Howlaha horumarinta degaanadda puntland.
Waxaa isna wax yar kadib hadalka qaatay oo lagu soodhaweeyey Cabdicasiis cagmadhigge oo isna Xog waran ka bixiyey siyaabaha ardaydu ku yimaadaan dalka india iyo jaamacadaha kala duwan ee ay dhigtaan iyo caqbadaha ka horyimaada xiliyadda ay waxbarashadda kujiraan iyo marka dhammeeyaanba.
Sidoo kale waxaa isna hadal qiimo badan halkaas kasoo jeediyey Eng Mohamed Adam Siciid oo ah arday waxkabartay dalka india isla markaasna hadda ka shaqeeya dalka imiraadka carabta, Eng Mohamed wuxuu si faahfaahsan uga xogwaramay fursadaha shaqo ee yaala dalalka Khaliijka Carabta iyo waliba siyaabaha kala duwan ee ardaydu uga faaiidaysan karaan islamarkaasna ay kor ugu qaadi karaan tayadda tacliintooda.
Sitaas lamida waxaa isna hadalka lagu soodhaweeyey oo lasiiyey Muxyadiin Maxamed Cali oo ahaa arday ruug cadaa ah sideetamaadkiina waxkabaran jiray dalka india, Muxyadiin wuxuu halkaas kasoo jeediyey hadalo dardaaran ah oo uu jeediyey ardayda kuna booriyey inay midoobaan, sidoo kale wuxuu dardaaran usoo jeediyey Meereeyaha Guud ee Shirkadda Golis isagoo ka codsaday inay fursad muuqata siiyaan ardayda waxbaratay oo aysan shaqadda ku gayn yaa taqaan balse ay ku geeyaan ama ku qiimeeyaan maxaad taqaaan.
Dabadeed waxaa halkaas isna Gabay aad u qiimo badan kasoo jeediyey Cabdirisaaq Siciid Nuur gabaygaas oo ahaa mid uu ku muujinayey isla markaasna amaan iyo bogaadin uu ugu dirayey Howlaha muhiimka ah ee shirkadda Golis u hayso Shacabka Puntland.
Wixii la sugaba waxaa ugu dambayntii si xushmadd leh loogu soodhaweeyey micrafoonka Maareeyaha Guud ee Shirkadda Golis Mudane Adam Shiikhdoon Cali, Md Adam wuxuu ugu horayn mahadcelin balaaran usoo jeediyey ardayda reer puntland ee waxkabarata Dalka india isagoo sheegay inay yihiin dad dedaalaya ee isku xiran.
Mahadcelin kadibna, wuxuu Md Adam ardaydii xog waran buuxa kasiiyey Arrimo badan oo dalka ku saabsan sidda Xaaladda Aminigga Guud Ee Dalka, Soosaarista Shidaalka Iyo Howla ay Shirkadda Golis u hayso Bulshadda Puntland.
Md Adam wuxuu sheegay inuu dalka hadda marayo meel wanaagsan wax walbana soo hagaagayaan, sidoo kale wuxuu xusay in shidaalkii ceelkiisii koowaad lagu guulaystay hadana lawado ceelkii labaad taas oo uu sheegay inay fursad u tahay dhammaan soomaalidda oo dhan.
Sidoo kale wuxuu dardaaran iyo baraarujin usoo jeediyey ardayda wuxuuna uga digay inay u hayaamaan dalal shishiiye kadib markay dhammaystaan waxbarashadooda, wuxuuna u sheegay inay aqoontooda ula soo noqdaan dalka ugana faaiideeyaan si markaas loogu aayo.
Khudbadii kadib waxaa Meereeyaha Shirkadda Golis la weydiiyey su’aalo ku saabsan qaabka iyo hanaanka ay u shaqayso shirkadda golis iyo inay fursad shaqo siinayaan ardayda dhammaysata jaamacadaha, wuxuuna Maareeyuhu si faahfaahsan dhammaanba uga jawaabay su’aalihii la wey iyadoo dhammaanba ay ardaydu kuwada qanceen jawaabaha kuna soodhaweeyeen sacab.
Md Adam Sheekhdoon wuxuu kamid ahaa wafdigii uu hogaaminayey Madaxweynaha Dowladda Puntland oo booqasho martiqaad ah ku yimid dalka India.
Ugudambayntii ardayda reer puntland ee india waxkabarata ayaa Maareeyaha Guud ee Shirkadda Golis Md Adam Sheekhdoon gudoonsiiyey Hadiyad Qaali ah waxaana hadyaadas gudoonsiiyey arday kamida ardayda waxkabarata dalka India oo la dhaho Cumar Badmaax.
SHAAQLI GOLILS says:
GOLIS MA AHAN MEEL AY KA FAA IIDAYSAN KARAAN DADKA WADANKA WAX U SOO BARTAY SABABTA OO AH MABA OGA QIIMAHA WAX BARASHADA TAASNA WAXAA SABAB SHAQAALAHEEDI OO AY DABOOLI WAYDAY BAAHIDOODA IYADA OO AH SHIRKADA KOOWAAD EE PL UGU DHAQAALAHA BADAN AYAA INGO MAXALI AH KA XAYSTAAN KUWA UGU MUHIIMSAN AMA UGU AQOONTA BADAN MARKA NINOWNA HA KU FAKARIN HADAAD WAX SOO BARATID INAAD GOLIS HUNGURI KAA GALO, LAAKIIN WAXAAN